Wararka | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 5
Home Wararka Page 5
Wararka ka imaanaya degmada Deyniile ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in qarax miino nooca dhulka lagu aaso ah lagu khaarajiyay Taliyahii Nabadsugida degmada Deyniile Cabdishakuur Raage xili oo ku sugnaa duuleedka degmadaasi. Taliyaha qaraxa miino lagu khaarajiyay ayaa la sheegay inuu saarnaa gaari nooca Soomaalida u taqaano Cabdibile, waxaana qaraxa...
Magaalada Garoowe ee Xarunta Puntland oo Hal Askeri Ku Dhintey iska Hor imaad ku Dhexmarey Ciidanka iyo Dabley Hubeysan.
Hal askari oo katirsan ciiddanka Puntland ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaacmeen iska hor imaad xalay ka dhacay magaalada Garowe, oo dhexmaray ciiddanka amniga iyo rag ka ganacsada maandooriyaha. Iska hor imaadkan ayaa dhacay xilli dambe oo saqdii dhexe ee xalay, kadib markii ciiddanka amniga oo sameynayay roondo...
Kooxo hubeysan oo burcad Koofur Afrikaan ah ayaa Xalay muwaadin Soomaaliyeed ku dilay goobtiisa ganacsi oo ku tiilay magaalada Quenstown ee gobolka Eastern Cape ee dalkaasi Koofur Afrika. Muwaadinka Soomaaliyeed ee lagu dilay dalkaas oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa lagu magacaabi jiray Liibaan Faarax Kheyre, kaaso burcadii dishay ay...
Waxaa maanta oo Talaado ah lagu wadaa in Maxkamada Cadaaladda Aduunka ee ICJ iney ku dhawaaqdo go'aanka kiiska dacwada Badda ee u dhaxeeysay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Kiiska ay murunka ku galisay Badda Soomaaliya dowladda Kenya ayaa soo bilawday sanadkii 2014 xiligaas oo dowlada Soomaaliya ay kiiska dacwada Badda ay...
Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen iney walwal aad u weyn ka qabaan dib u dhaca doorshada iyo tafaraaruqa siyaasadeed ee ka jira dalka oo ay sheegeen in xaalad hubaanti la'aan dhanka doorashooyinka uu dalka galay. Musharaxiinta ayaa qoraalka ay...
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in uu difaacayo xoriyada iyo ganacsiga ay hablaha reer Somaliland leeyihiin, isagoo dad aanu carabaabin ku eedeeyay in ay doonayaan in ay burburiyaan ganacsiga haweenka. Madaxweynaha ayaa sheegay in dumarku ku dulmanyihiin, dhaqanka Soomaalida, isla markaana, uu xukuumadiisa kasiin kariwaayay qaybtii ay ku...
Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika ayaa taageeray hawlgalka wadajirka ah ee Qaramada Midoobay ee hoos imaanaya Cutubka VII ee howlgalka nabad -ilaalinta Soomaaliya, sanadka soo socda. Howlgalkan ayaa ah in wixii ka dambeeya 2021 howlgalka Amisom lagu wareegiyo Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay oo wadajir ah. Ama in...
Guddoomiyaha maamulka Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa xalay aqalka madaxtooyada gobolka Hiiraan waxa uu casho sharaf iyo soo dhaweyn uu ugu sameeyay xubnaha ka socday guddiyada doorashada Fedaraalka iyo Hirshabeelle. Casho sharafta waxaa ka qeyb galay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka kan degmada iyo waliba qeybaha...
Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Africom oo Kulan La Qaatey M/weynaha Jubaland Axmed Madoobe.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa Xarunta Madaxtooyada ku qaabilay taliyaha Howlgalka Maraykanka ee Soomaaliya Kornayl Thomas Sarrouf iyo sarakiil kale. Kulanka oo ka dhacay aqalka madaxtooyada, ayaa lagaga hadlay sidii loo dardar galin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda A-Shabaab iyo tageerada howlgalka Maraykanka ee Soomaaliya. Kulankan ayaa kusoo beegmay...
Guddoomiyaha xisbiga UCID ee Somaliland Faysal Cali Waraabe, ayaa siyaasiyiinta reer Muqdisho ku eedeeyay in raafka Laascaanood ay ka dhigteen barnaamij ay kursiga ku gaadhaan, waxaanu sheegay in dadkii 1960 iyo kahor Somaliland dagaana kaliya ay muwaadiniin yihiin. Faysal ayaa sheegay in sida Dastuurka Somaliland sheegayo kaliya cidii Somaliland daganayd...
1...456...1,650Page 5 of 1,650